Qodobo muhiim ah oo looga dooday kulanka Wasiirada Soomaaliya
MUQDISHO, Soomaaliya - Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya, Xasan Cali Khayre ayaa maanta oo Khamiis ah ku shir-gudoomiyey xafiiskiisa ku yaalla gudaha Villa Somalia kulanka todobaadlaha ee Gollaha Wasiiradda dowladda.
Kulankaan oo ay kasoo wada qaybgaleen inta badan Wasiiradda marka laga reebo xubnaha qaar ee Madaxwayne Farmaajo ku wehlinaya socdaal dalka dibadiisa ayaa looga dooday qodobado muhiim ah.
Qodobadda shirka looga hadlay ayaa kala ahaa; hanaanka dib u habaynta dhaqaalaha, amniga, olalaha is-xilqaan iyo sharciyadda doorashadda ee sanadka 2020-ka, taasoo la filayo inay noqoto mid qof iyo cod ah.
Ra'iisul Wasaare dalka, mudane Xasan Cali Khayre oo kulankaan ee Gollahiisa Wasiiradda ka hadlay ayaa shaaca ka qaaday in qodobadda shirka maanta looga hadlay uu ahaayeen kuwa muhiim ah.
"Waxaan maanta shir gudoomiyey kulanka todobaadlaha ee Gollaha Wasiirkadda oo aan uga doodnay arrimo muhiim ah," ayuu soo dhigay Khayre bartiisa gaarka ah ee uu ku leeyahay Twitter-ka.
Kulankaan ay yeesheen Gollaha Wasiiradda Soomaaliya ayaa ah mid Dastuuri ah, kaasoo xukuumadda ay yeelaneyso todobaadkiiba hal jeer inta ay xafiiska joogaan Wasiiradda, waxaana looga hadlaa dhacdooyinka isbuucaasi taagan.
DF oo midnimo u muujisay Sacuudiga oo Mareykanka u hanjabey
Soomaliya 15.10.2018. 13:15
Khayre oo u safray Qadar xili uu Mooshn ka yaallo Farmaajo
Soomaliya 12.12.2018. 16:24
Ajaaniibta ku sugan Soomaaliya oo la tirakoobayo [Sawirro]
Soomaliya 16.08.2018. 23:24
Shirka Gollaha Wasiirada oo lagu ansixinayo magacaabidda Safiiro cusub
Soomaliya 19.04.2018. 10:10
Farmaajo oo qaadey tallaabo taariikhi ah oo ku aadan xiriirka Kenya
Soomaliya 06.03.2019. 12:45